Les Souillés du fond de cale: hijanona iray volana eto | NewsMada
Les Souillés du fond de cale: hijanona iray volana eto
Tarika iray manana ny mampiavaka azy ny Les Souillés du fond de cale, avy any Côtes-d’Armor (Frantsa) noho izy mivoy ireo hiran’ny tantsambo. Ahitana mpikambana dimy mirahalahy ny tarika, niorina ny taona 1991, nandritra ny « Festival du chant de marin » tany Paimpol.
Hanatontosa fitetezam-paritra eto amintsika ny Les Souillés du fond de cale, ny 2 hatramin’ny 25 novambra izao. Tsy hijanona amin’ny lafiny zavakanto ny foto-dian’izy ireo fa hirona ihany koa amin’ny fanentanana sosialy, noho ny fiaraha-miasany amin’ny fikambanana « Solidarité Trégor Madagascar ».
Hisy, ohatra, ny fihaonan’ireo mpanakanto amin’ny mponina ao Ambatomanga. Arahina fampisehoana miavaka izany. Miavaka satria hiaraka amin’ireo tarika mpanao vakodrazana ao an-toerana. Ankoatra izany, fampisehoana miisa roa ihany koa no fantatra fa hotanterahin’ny Les Souillés du fond de cale, eto Antananarivo sy any Toliara, mandritra izao fandalovany eto Madagasikara izao. Hisy ny fampahafantarana ny tarika, fampirantiana sy fampianaran’izy ireo karazan-dihy avy any amin’ny toerana niaviany.
Handray feo ny rakikiran’izy ireo fahafito ny tarika, aorian’ity diany eto amintsika ity. Tany am-boalohany, namerina ireo hira nentim-paharazana avy any aminy ny Les Souillés du fond de cale. Rehefa nandeha teny fotoana, namorona ny hiran’izy ireo manokana izy dimy mirahalahy ka tazoniny hatrany ny hoe hiran’ny tantsambo, saingy ahenoana lanto kokoa.